आदिवासी अभियन्तहरु कसैले पनि यस संविधानलाई स्वीकारेको अवस्था छैन
मंगलवार, मंसिर ७, २०७३
– अहिले केमा ब्यस्त हुुनुहुन्छ ?
अहिले म पुर्णत आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार प्राप्तिका लागि समर्पित भएर लागिरहेको छु । सामाजिक राजनितिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु मै व्यस्त छु मेरो खासै अरु ब्यवसाय छैन ।
– अहिले संविधान संशोधनको कुरा आईरहेको छ तपाईहरु आन्दोलन गरिरहनुभएको छ खास केमा हो त असहमति ?
हो, संविधान संशोधनको माग उठाएर अझै भनौ संविधान संशोधन गराउनकै लागि भनेर हामीले आन्दोलन गरिहेको सर्वविदितै छ । यो संविधान जतिबेला जारी भयो वा सुरु भयो त्यो जारी हुने बेला नै हामीले के भनेका थियौ भने संविधान जारी गर्दा सबै पक्ष, समुदाय, क्षेत्र, वर्गलाई समेटिने र सबैको सर्वस्वीकार्य संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय थियो अथवा भनौ भनाई थियो । तर के भयो भन्दा केही ठूला भनौदा दलहरुले एकलौटी ढंगले विशेष गरी उत्पिडित समुदाय र अन्य वर्ग र समुदाय र समुदायलाई नसमेटिकन आफ्नो मनोगत ढंगले संविधान जारी गरे । यसैको उपज यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य रुपले बनाउन सकिएन र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले हाम्रो कुरो के हो भने संविधान संशोधन गरेर लानुपर्छ । संविधान संशोधनमा सबै पक्ष र समुदायलाई समेटेर, सबैको मनोभावलाई समेटेर लगेपछि मात्रै स्वीकार्य हुन्छ र संविधान संशोधन हुन्छ ।
– अहिलेको संविधानमा तपाईहरुको खास असहमति के हो त ?
वास्तवमा यो संविधान सरसरती हेर्दा त यो संविधान पुरै खारेज गर्नुपर्छ । तैपनि हामीले कम्परमाईजमा आएर हेर्दा हामीले सामाजिक क्षेत्रबाट, उत्पिडितहरुको क्षेत्रबाट आन्दोलन गरिरहँदा हामीले मुख्यत हामीले संघीयताको सवाल, राज्यको पुर्नसंरचना हुँदाखेरी यसको चाहि सिमाङ्कनको सवाल, निर्वाचन क्षेत्रको सवाल, प्रदेश सिमाङ्कनको सवालका कुरालाई लिएर २६ बँुदे माग सरकार समक्ष पठाएका छौ । विशेष गरी समानुपातिक समावेशी लगायत संघीयताको मोडेल मै चाहि हाम्रो असहमति छ । संघीयतामा जाँदाखेरी हामीले स्वयत्तता सहितको प्रदेशहरु निर्माण हुनुप¥यो भन्ने हो । यो खाली भूगोल विभाजन मात्र होईन । राजनीतिक अधिकारको विभाजनको अधिकार हुनुप¥यो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारको विभाजन हुनुप¥यो अनि सार्थक संविधान पाएको अनूभूति अझ भनौ नयाँ संरचना बन्न जान्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । अहिले त्यो देखिदैन र हामीले संविधान संसोधनको विषयमा पनि अहिले जुन सात प्रदेश आएको छ त्यो प्रदेशको संख्या आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । तर प्रदेशहरु निर्माण गर्दा स्वयत्तता सहतिको, विशेष अधिकार सहितको प्रदेशहरु निर्माण हुनुप¥यो । त्यही अनुसार जानुप¥यो अहिलेको संविधानमा त्यो कहि पनि भएको छैन । खाली हिजो राष्ट्रिय पञ्चयत अथवा जिल्ला पञ्चायत थियो त्यसलाई चाहि पछि बहुदलीय ब्यवस्था आएपछि जिल्ला विकास समिति बनाईयो ।त्यस्तै अहिले चाहिँ एक नम्बर, दुई नम्बर, तीन नम्बर प्रदेश भन्यो त्यसमा कुनै अधिकार नै छैन जनतालाई । उत्पिडित समुदायको, पिछाडि परेको वर्गको, मधेशको, राज्यबाट उपेक्षामा परेको समुदायको कुनै चाहि अधिकार सुनिश्चित हुने स्थिति छैन । त्यसकारण अहिलेको संविधानमा संशोधन गर्दाखेरी यी कुराहरुलाई समावेश गरेर सबैलाई सर्वमान्य बनाऔ भन्ने हाम्रो चाहना हो, हाम्रो माग हो र हाम्रो भनाई हो ।
– तपाईहरुले भनेजस्तो संविधान संशोधन भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
संविधान संशोधन हुनैपर्छ । हामी त्यसलाई विश्वास गर्छौं । अहिले पनि हामीले सरल ढंगबाट सरल उपाय निकालेर संविधान संशोधन मार्फत मुलुकको समस्या समाधान गरौं, सबै तह र तप्का र समुदायले स्वीकार्ने खालको संविधान बनाऔ भन्ने हो । संविधान संशोधन नै यसको उक्त विकल्प हो । यदि अब कसैको ढिपीको कारण संविधान संशोधन भएन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन । हामी आन्दोलनमा जान्छौ । सशक्त आन्दोलन मार्फत उत्पिडित समुदायको हक र अधिकार राज्यमा स्थापित गरेर छाड्छौ । हामी घनिभूत आन्दोलनको तयारीमा छौं ।
– अबको आन्दोलन कस्तो खालको हुन्छ ?
हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै हाम्रो विश्वास हो । शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आन्दोलन गरेर परिवर्तन गर्न चाहन्छौ । यदि हामीले गरेको आन्दोलनलाई कसैले कमजोरीको रुपमा लिने, कसैले यसलाई दबाउने, कसैले यसलाई डोमिनेशन हुने काम गरे भने हामी यसको विकल्पमा जस्तोसुकै संघर्ष गर्नको निम्ति पनि तयार हुन बाध्य हुनेछौ । चाहे त्यो अन्य खालको चाहे संघर्ष नै किन नहोस । तर प्रधान कुरो चाहिँ के छ भने हामी शान्तिपूर्ण तवरले नै जनताको बीचमा जान्छौ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै हामीले एकल जातीय, एकल समुदाय र नश्लवादी चिन्तनबाट गाईडेड भएको यो सत्तालाई हामी विफल बनाउने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ ।
– जनजातिहरु मै पनि संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर मतभेद भैरहेको छ यो अवस्था कसरी आयो त ?
केही व्यक्ति निश्चित पार्टीको प्रलोभनमा परेर र ब्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका केही आदिवासी जनजाति अगुवाहरुका कारण यो अवस्था देखिएको हो । उनीहरुले घुमाउरो ढंगले समर्थन गरेको हो कि भन्ने देखिएको हो तर भित्र जाँदा खेरी सिंगो आदिवासी जानजाति आन्दोलनभित्र, जनजाति समुदाय भित्र हेर्दा खेरी त यसलाई यो संविधानलाई स्वीकार्ने कमै मात्र पाईन्छ । यसमा बाहिरी मिडियाले पनि उकास्ने उचाल्ने काम गरिरहेको छ । तर वास्तविक आदिवासी जनजाति जो आन्दोलनमा लामो समयदेखि लागि रहेको छ उहाँहरु यो संविधानको विपक्षमा हुनुहुन्छ । हिजो कै कुरा गरौ आन्दोलनबाट आएका आदिवासी अभियन्तहरु कसैले पनि यस संविधानलाई स्वीकारेको अवस्था छैन । तर विडम्बना के भन्नुपर्ने हुन्छ भने आदिवासी जनाजाति महासंघको पहलकदमी भूमिकामा रहेका साथीहरुले जुन सही गर्ने काम गरे त्यो यो आन्दोलनको ईतिहासमा एउटा भयंकर गल्ति गरेको छ ।
– अब पार्टीगत कुरा गरौ, तपाईहरु क्षेत्रीय पार्टीको रुपमा स्थापित हुन खोजिराख्नुभको हो ?
विल्कुल होईनौ । कसले भन्यो हाम्रो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी भनेर । हाम्रो पार्टी राष्ट्रियताको मुद्दा बोकेर हिडेको पार्टी हो । हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण वर्ग र क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको पार्टी हो । यसमा तपाईहरुले नि देखिरहनुभएको छ नि । हामीले हिमालदेखि तराईसम्मको जनताको हितको कुरा गरिरहेका छौ । नेपालको सन्दर्भमा हामीले यो नौलो अभ्यास गरिरहेका छौ । अरुभन्दा पृथक चाहि हामीले पार्टीको निर्माण गरिरहेका छौ । यो पार्टी भित्र हाम्रो चाहि विधानमा व्यवस्था भए अनुसार सबै समुदायलाई समेट्ने खालको एउटा विधान छ । त्यहि अन्तर्गतको हाम्रो पार्टी हो । यो कुनै क्षेत्रीय पार्टी होईन । खाली मधेशमा अलिकति हाम्रो संघर्षको कार्यक्रमहरु बढी भो पार्टीको कार्यक्रमहरु बढी भो यो मात्रै हो । तर सोलुखुम्बुदेखि ताप्लेजुङसम्म, सप्तरीदेखि झापासम्म, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पादेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्म हाम्रो पार्टीको संगठन रहेको छ । त्यासो त यो एउटा राष्ट्रिय एजेण्डा बोकेको पार्टी हो । हामीले जुन राष्ट्रिय राजनीति जुन अस्थिरतामा छ हिजोदेखिको दलहरुले चाहि के ग¥यो भन्दा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीद्वारा एकल समुदायले नश्लवादी चिन्तनबाट जुन खालको राज्य सञ्चालन ग¥यो हामी त्यसलाई ब्रेक गर्दै सबै समुदायलाई समेट्ने गरी पार्टीको पनि संरचना र राज्यको पनि त्यहि संरचना हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौ । यो कुनै क्षेत्रीय पार्टी होईन । खाली यसलाई चाहि ठूला भनाउदा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूर्तिका निम्ति केही मिडिया लगायत आफ्नो पहुँचमा भएको हुनाले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर यस्तो प्रचार गरेको छ । तर हाम्रो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होईन । यो राष्ट्रिय पार्टी हो । भर्खरै मात्र हाम्रो पार्टी श्रदेय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संखुवासभा जानुभयो । यस्तै सोलुखुम्बु जानुभएको छ । रामेछाप जानुभएको छ । यस्तै हाम्रो पार्टीको बरिष्ठ नेता अशोक राई तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा जानुभएको छ । जनताले भव्य रुपमा उपेन्द्र यादवलाई पहाडमा र अशोक राईलाई तराईमा स्वागत गर्नुभएको छ । त्यसकारण कुनैपनि हिसावले यो कुनै क्षेत्रीय पार्टी नभई राष्ट्रिय पार्टीकै रुपमा रहेका छौ र रहिरहनेछौ । यो पार्टी भनेको राष्ट्रको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित भईरहेको पार्टी पनि हो भन्न चाहन्छु । यो पार्टीबाट मात्रै मुलुकको एउटा राजनीतिक निकास दिने सम्भावना छ ।
– नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन पनि आईसक्यो के छ यहाँहरुको तयारी ?
हो महासंघको महाधिवेशन भन्दा पनि यो महासंघको विधि हो । यसको विधिसम्मत हुने भएकोले यो प्रकृया हो । त्यहि प्रकृयाको लागि यहि महिनाको २५, २६ र २७ गते महाधिवेशन हुँदैछ । म चाहि एउटा जातीय संगठनको चाहि सम्बद्ध संस्थाको चाहि आधिकारिक ब्यक्ति भएको नाताले यो महासंघको महाधिवेशनबाट हामीले हिजो गरेको कमी कमजोरीबाट जो जसले त्यो खालको कमी कमजोरी दोहो¥याउन नदिने गरी सवल सक्षम र आदिवासी जनजातिहरुको विश्वास जितेको व्यक्ति र आदिवासी जाजातिहरुको आन्दोलनलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने ब्यक्तिलाई चाहि नेतृत्वमा ल्याउने हाम्रो ईच्छा चाहना छ । त्यही अनुसारको चाहि गतिविधिहरु भईरहेको छ ।